Fikasana hamono ny Seg teo aloha: maty tany am-ponja Randriamialy Faliherisoa - ewa.mg
News - Fikasana hamono ny Seg teo aloha: maty tany am-ponja Randriamialy Faliherisoa
Nodimandry tany am-ponja teny
Tsiafahy , tamin’ity herinandro ity, ilay ahiana ho
voasaringotra ho nikasa hamono sy hitifitra ny Seg teo aloha,
ny Jly Ravalomanana Richard, Randriamialy Falihery Eric .
« Tsy misy tokony hidirany izany raharaha izany fa
endrikendrika fotsiny ihany », hoy ny fianakaviany sy
ireo mahafantatra azy. Notsiahivin’izy ireo fa mpivarotra fiara
tsotra no asany ary sendra teo amin’ilay toerana nisamborana olona
ny tenany tamin’izany, ka noraofina niaraka tany koa izy.
« Niakatra ny tosidrany, ka namoy ny ainy tany am-ponja
izy », hoy ihany ny fianakaviana.
Nitondra fanazavana momba izao
raharaha izao ny eo anivon’ny fonja fa efa nandalo fitsaboana sy ny
dokotera eny Tsiafahy izy io. Tokony halefa hampidirina hopitaly
saingy izao namoy ny ainy izao.
L’article Fikasana hamono ny Seg teo aloha: maty tany am-ponja Randriamialy Faliherisoa a été récupéré chez Newsmada.
Teatra sy dihy: naseho an-tsehatra ny “8 septambra”
Tontosa ny « Sharity Events ». Hetsika ara-kolontsaina tetsy amin’ny I H S Ankatso nokarakarain’ny ONG Vahatra, ny asabotsy 28 aogositra lasa teo, nanomboka amin’ny 2 ora tolakandro … Nibahan-toerana tamin’izany ilay tantara “8 septambra”, izay sanganasan’i Nofy Andrianjaka, nolalaovin’izy ireo an-tsehatra miendrika teatra. Maro ny sehokanto hita teny an-toerana toy ny teatra sy dihy, nahitana ny Vondrona Mikanto teatraly sy Laryh Dance Crow, izay anisan’ny manana ny toerany ankehitriny. Anisan’ny nanafana sehatra tao koa i Njara Marcel, tamin’ilay hira “Mamiratra”, ny “avy ato am-poko”, ny “Izy”. mpanakanto anisan’ny manana ny toerany ankehitriny, tao koa i Nofy no Voary, izay poeta manandratra ny kolontsaina malagasy. Maro ny hetsika efa nokarakarain’ny ONG Vahatra hoenti-manandratra ny kolontsaina sy ny maha olona. Vao tsy ela akory izay no nanao hetsika tolo-tanana tetsy amin’ny toeram-pitsaboana ny marary ara-tsaina Centre Hospitalier Universitaire de Santé Mentale Anjanamasina ny ONG Vahatra. Tsy hijanona eo fa maro ny seho hotanterahin’izy ireo, indrindra ny fanampiana amin’ny lafiny maha olona.NarilalaL’article Teatra sy dihy: naseho an-tsehatra ny “8 septambra” a été récupéré chez Newsmada.
“Andao iarahana mifehy ity valanaretina Covid-19 ity”. Fanirian’ny ministeran’ny fahasalamam-bahoaka ny hananan’ny vahoaka Malagasy fahasalamana ao anatin’izao fetin’ny faran’ny taona izao. “Mba hanohizantsika ny fifehezana ity aretina coronavirus ity, efa nolazaina tamintsika fa iarahantsika mifehy ity aretina ity ary tsy tanteraka izany raha tsy ny tsirairay no resy lahatra mifehy tena. Nitsiriritan’ny olona antsika Malagasy ny amin’ny nahaizantsika nifehy ny aretina Covid 19”, hoy i Dokotera Rakotoarivony Manitra, talen’ny foibe ny fampiroboroboana ny fahasalamana ao amin’ny ministeran’ny fahasalamam-bahoaka. “Araka ny toromarika nomen’ny ministry ny fahasalamam-bahoaka, Rakotovao Jean Louis dia apetraka amintsika indray ny hoe: andao iarahana mifehy ity valanaretina ity”, hoy izy. Noho izany, “ireto misy fototra telo, fihetsika tsotra ifampizarantsika amin’izao faran’ny taona izao na ny fetin’ny noely na fetin’ny faran’ny taona: Andao hanao fety isan-tokantrano, andao eritreretina mandrakariva fa mbola misy virus mivezivezy eny amin’ny tontolo rehetra eny ka isika rehetra no hiaraka hifandamina ho an’ny fahasalamana, tsy hifampizara aretina fa hifampitsinjo ny amin’ny fahasalamana”, hoy hatrany ity talen’ny foibe ny fampiroboroboana ny fahasalamana ao amin’ny ministeran’ny fahasalamam-bahoaka ity. Nambarany fa raha tsy maintsy mandeha amin’ireny fiangonan’Andriamanitra na Synagoga ireny dia eritrereto mandrakariva ny fanajana ny elanelana iray metatra sy ny fanaovana arotava ara-dalàna. Sao aretina no hifamindrana kanefa fahasoavana no tadiavina. Ankoatra izany, “ao anatin’ny faran’ny taona sy taom-baovao, malaza be ny fifanorohana. Mangataka antsika rehetra re! Zavatra hita tato ato dia ny iray tsy manao arotava dia ny iray manao, mifanoroka amin’ilay masque izay mampatahotra indrindra satria eo amin’ny tsy tokony hametahana ilay molotra no hametahana azy. Andao hifampitsinjo, hifampitondra ny mahafinaritra sy ny tsara dia tsy atao aloha ny mifanoroka fa atao vitan’ny kopakopan-tanana sy ny maso mibanjina ary aoka tsy hisy hilaza hoe ho tsy tia ahy iny olona iny raha tsy mifanoroka”, hoy i dokotera Rakotoarivony Manitra. Lynda A. VIDEO: Cet article DR MANITRA RAKOTOARIVONY: Andao vitaina amin’ny kopakopan-tanana sy maso mibanjina ny fifampiarahabana nahatratry ny taona est apparu en premier sur déliremadagascar.L’article DR MANITRA RAKOTOARIVONY: Andao vitaina amin’ny kopakopan-tanana sy maso mibanjina ny fifampiarahabana nahatratry ny taona a été récupéré chez Délire Madagascar.
Mpikarakara Kaly tsinjo ao Toamasina: terena handoa 100 000 Ar isan-kerinandro
Hakana vola ireo mpikarakara ny Kaly tsinjo 10 eto an-drenivohitr’i Toamasina. Misy amin’ireo koa anefa no manao antsirambina ny asany.Ny asabotsy teo ny fiantsoana nataon’ny mpandrindra ny Kaly tsinjo nataon’ny talen’ny kabinetran’ny kaominina ambonivohitr’i Toamasina, i Hubert Tatian. 12 ireo tonga nanatrika ny fihaonana tamin’ny tomponandraikitra mpandrindra ny Kaly tsinjo. « Mila fiaraha-miasa isika fa tsy misy ranom-panafody sy solika hivezivezena ny ao amin’ny kaominina sy ny faritra ka mandoa vola 100 000 Ar isan-kerinandro ianareo », hoy ny mpandrindra ny Kaly tsinjo tamin’ireo mpivory, araka ny angom-baovao. Nilaza kosa ireo mpikarakara sakafo fa mbola tsy nahazo vola avy amin’ny fanjakana mihitsy fa volan-dry zareo madiodio ny hampiasaina hividianana sakafo. « Aloavy aloha ny anay », hoy ireo mpikarakara Kaly tsinjo. Vokany, nandrahona hanakatona ny toeram-pisakafoana ity mpandrindra ity. Nohamafisin’ireto mpikarakara Kaly tsinjo ireto fa tomponandrakitra izy ka afaka manakatona ny toerana tsy hanome vola azy. Ampy tsara ny ranom-panafody ary tsy misy olana ny solika raha nanontaniana anefa ny ben’ny Tanàna sy ny eo anivon’ny faritra Atsinanana.Misy manao antsirambinaEny ifotony, tao amin’ny fokontany Ankirihiry Atsimo, tsy manaja ny elanelana iray metatra ireo misitraka sakafo Kaly tsinjo. Ny mpikarakara rahateo, tsy manaraka ny lamina amin’ny laoka tokony haroso ny mpihinana. Nohamafisin’ny loharanom-baovao fa manao antsirambina ny asa ireo mpikarakara sakafo ireto. Ny hitondra ambin-tsakafo hody no mahamaika azy ireo.SajoL’article Mpikarakara Kaly tsinjo ao Toamasina: terena handoa 100 000 Ar isan-kerinandro a été récupéré chez Newsmada.
Fitarainana momba ny fanabeazana: mavesatra ho an’ny sekoly tsy miankina ny hetra
Sampandraharaha mitondra soa ho an’ny vahoaka ny sekoly miahy tena ary mizaka ny satan’ny asa fanabeazana fa tsy natao hitadiavana tombombarotra toy ny orinasa. Maneho ny olana ireo mpiandraikitra manoloana ny hetra takin’ny fanjakana. Araka ny fepetra ankapobeny mifehy ny hetra, tafiditra amin’ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana ampiasaina amin’ity taona ity, tsy maintsy manefa tataon-ketra alaina amin’ny karama (IRSA) amin’ny sandany 10% ny sekoly tsirairay. Ny saram-pianaran’ny mpianatra anefa, tsy azo hakana ampahany hatao hetra ka sahiran-tsaina ny mpitantana sekoly manoloana izany. “Amin’izao fotoana izao, tonga ny mpitaky hetra maka ny hetra tokony ho naloa nanomboka ny taona 2017 raha hanamboatra “carte d’identité fiscale” sy laharan’ny karatra maha mpandoa hetra ny mpiandraikitra ny sekoly tsy miankina”, hoy ny filohan’ny fikambanan’ny sekoly miahy tena Aile (Association des instituts laïques pour l’éducation), Rakotomalala Célin. Mavesatra ho an’ny sekoly izany sora-bola izany, indrindra tsy misy fidiram-bola ankoatra ny saram-pianarana avy amin’ny mpianatra. Nampahatsiahiviny fa nihevitra ny sekoly tsy miankina ho sampandraharaha ilain’ny vahoaka ny fitondrana nifanesy ka ny vola azony no entiny mampihodina ny asany nefa tataovana hetra indray ankehitriny. Ireo mpanabe amin’ny maha olom-pirenena azy, efa mandoa ny IRSA 2 000 Ar isam-batan’olona miasa amin’ny sekoly.Ankoatra ny hetra, tsy nisitraka tolotra fanampiana ny mpanabe avy amin’ny sekoly miahy tena nandritra ny fihibohana ary mbola nanampy trotraka ny fanafoanana ny fanampiana ny fampihenana ny vola mivoaka amin’ny ray aman-dreny ary ny fanohanana 24 000 Ar ho an’ny mpampianatra miampy ny tosika ho an’ny fikambanan’ny sekoly miahy tena. Nanome toky ny minisitry ny Fanabeazana fa hangataka hamerenana ireo tohana telo ireo raha nitafa tamin’ny solontenan’ny mpiandraikitra ny sekoly tsy miankina.Vonjy A.L’article Fitarainana momba ny fanabeazana: mavesatra ho an’ny sekoly tsy miankina ny hetra a été récupéré chez Newsmada.
Mampahatsiahy ny famaritana ny fijalian’ireo vehivavy mitondra vohoka ny sedra lalovan’ireo orinasa tsy miankina eto Madagasikara noho ireo fepetra ara-pahasalamana ateraky ny krizy ara-pahasalamana, efa ho dimy volana izao. « Miankindrindrina irery » ireo orinasa tsy miankina rehetra, eny hatramin’ireo manan-jara ka afaka nanohy ny fandraharahany tao anatin’ny fihibohana aza. Manapa-kevitra ny fanjakana hoe mikatona daholo ny orinasa tsy ankanavaka, dia tsy maintsy manaraka ireo orinasa tsy miankina. Nangaina teo ireo tompon’orinasa sy mpiasa marobe, fa tsy nahazo afa-tsy ny fanemorana ny fandoavan-ketra (amin’ity vanim-potoana tsy nihodinan’ny milina sy ny tsy fisian’ny mpanjifa akory!) sy ny fanamoràna ny fampindramambola ary izay mpiasa tsara vintana nahazo anjara tamin’ireo endrika fanampiana sosialim-bahoaka isan-karazany isampokontany tany (aleo mihinan-kely toy izay mandry fotsy). Tahaka ny akohokely notsipazam-potsimbary indray ireo tsy miankina rehefa nanome alalana amin’ny fiverenan’ny asa andavanandro, izay narahin’ny famerana ny ora fiasana, ireo orinasa tsy miankina : miantoka fitaterana, hono! Orinasa iza no hahavelon-tena amin’izany? Mpiasa an’hetsiny anefa no fantatra fa voatery naato tamin’ny asany, tao anatin’izao hamehana ara-pahasalamana izao. Atosika hidiran-trosa ireo mpiasa sasany raha ho raikitra ihany ilay fampindramam-bola homen’ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana ara-tsosialy (Cnaps). Ny tompon’ orinasa, etsy an-daniny, ataon’ny fandoavan-ketra mivadika atidoha. Tahaka ny vehivavy mitondra vohoka satria hiteraka famokarana sy ho mpanjifan’ny tsena marobe anefa ireo orinasa tsy miankina. Iretsy reny aza mba hoe miaritra kely (na be) fa hanana ny soa, fa ireo tsy miankina kosa dia tsy manana antoka fa ho tafarina, raha aoriana kely ao. Mifanohitra tanteraka amin’ireo mamboly voky tsy mamboly voky, ka na « kaofinimà » aza dia mitomboka foana ny isaky ny faran’ny volana. Asa izay fanantenana navoakan’izao fifanakalozan’ireo solontenan’ny sehatra tsy miankina tamin’ireo mpamatsy vola Eoropeana izao, fa soa mba nahatsiaro an-dry zareo « miankin-drindrina irery » aza ny vahiny! L’article Miankin-drindrina irery est apparu en premier sur AoRaha.
Vita ny fitiliana ny razana: tsy matin’ny vaksiny ny Dr Hasina
Namaly ny ahiahin’ny maro ny nahafantarana fa tsy misy ifandraisany amin’ny vaksiny Covishield ny nahafaty ny Dr Raherimandimby Hasina, ilay mpampianatra tao amin’ny oniversiten’i Fianarantsoa nodimandry tampoka, iray andro taorian’ny nanaovany vaksiny.Vita ny fanadihadiana nataon’ny manampahaizana tamin’ny razana. Navela nalalaka izy ireo nijery sy nanao fitiliana. Anisan’izany ny fakana singa maro nentina notilina, raha ny fanazavana nentin’ny minisitry ny Fahasalamana. Ireo vaomiera teknika sy ny akademiam-pirenen’ny dokotera no namoaka miaraka ny fanambarana.Voaporofo tamin’ny alalan’ny fitsirihana maro natao izany fa tsy misy idiran’ny vaksiny nataony velively ny nahatonga ny fahafatesan’ny Dr Raherimandimby Hasina.“Azo atao tsara ny manohy ny fanaovam-baksiny, araka izany, fa tsy misy tokony hatahorana na hampisalasala”, hoy hatrany ny minisitra.Tatiana A L’article Vita ny fitiliana ny razana: tsy matin’ny vaksiny ny Dr Hasina a été récupéré chez Newsmada.
DGSR: hanao fitsirihana manokana ireo fiara
Ho fisorohana ny loza vokatry ny tsy fahatomombanana teknika manoloana ny mety ho fahabetsehan’ny fiara mifamoivoy mandritra ny fahatongavan’ny papa ray masina eto Madagasikara, ny volana septambra 2019 ho avy izao, sy ho fitsinjovana ny fialana sasatry ny mpianatra, mampandre ny besinimaro ny foibe fitsarana fiarakodia (DGSR) fa hisokatra sy hiasa ireo ivontoerana fitsarana fiarakodia rehetra manerana ny Nosy, ny asabotsy 3, ny asabotsy 10, ny asabotsy 17 ary ny asabotsy 24 aogositra 2019 ho avy izao manomboka amin’ny 7 ora maraina ka hatramin’ny 3 ora tokanandro. Mampahatsiahy ny tompon’ireo fiara mikasa hitatitra olona hanao “spécial” ny DGSR fa tsy maintsy mandalo fitsirihana teknika manokana izy ireo na mbola manan-kery aza ny fe-potoana azo ampiasana tamin’ny fitsirihana teknika, ankoatra ny fitsirihana mahazatra teknika. Noraisina izao fepetra izao hisorohana ny loza sy hiarovana ny ain’ireo mpandeha.Jean ClaudeL’article DGSR: hanao fitsirihana manokana ireo fiara a été récupéré chez Newsmada.
Hafatry ny Fivondronamben’ny eveka: “Mahantra noho ny kolikoly sy ny tsy fahaiza-mitantana isika”
Hentitra ny hafatry ny Fivondronamben’ny eveka (Fem) sady nampahatsiahy ny lahatenin’ny papa Fransoa tamin’ny fitsidihany teto Madagasikara, ny 6-10 septambra 2019. Nahazo ny anjarany avokoa ny tompon’andraikitra rehetra.“Tany voatsodranon’Andriamanitra noho ny harena voajanahary maroloha hita ao aminy i Madagasikara. Eo koa ny toetra mahate hidera ananan’ny mponina ao aminy sy ny fahendreny ary ny soatoavina nentim-paharazana mifototra amin’ny fihavanana sy ny fanajana ny aina ary ny fanandratana ny fanahy maha olona”, hoy ny fanambaran’ny. Nohitsin’ny hafatra anefa fa mahonena ihany ny mahita fa tafahitsoka ao anatin’ny fahantrana lalina ny vahoaka malagasy. ”Eo ny fitiavan-tena, noho ny tsy fahaiza-mitantana ary ny fanjakan’ny kolikoly mahahenika ny seha-piainana manontolo”, hoy ihany izy ireo. Anisan’ny fositra lehibe manimba ny fiainam-piaraha-monina ary vato misakana amin’ny fampivoarana tena izy ny kolikoly, tena mahazo vahana eto amintsika ary mahahenika ny seha-piainana rehetra.Mirongatra ny tsy fandriampahalemanaNasian’ny papa tsindrim-peo manokana ny tokony hiezahana mafy hiady hamongotra hatramin’ny fakany izany tamin’ny lahateny nataony teny Iavoloha, araka ny fanambaran’ny Fem hatrany. Nankahery ny mpitondra ny papa. “Mba hiady amin-kery sy amim-pahatapahankevitra amin’ireo endrika manokana isehoan’ny kolikoly eto aminareo sy ny kajikajy ahazoana tombontsoa izay mampitombo ny fahasamihafana ara-tsosialy”.Nohararaotin’ny eveka koa ny manamarika fa mirongatra indray ny tsy fandriam-pahalemana miseho amin’ny fomba feno habibiana. Koa miantso ny tompon’andraikitra mba hijery paikady mahomby hiadiana amin’izany fa mandry tsy lavo loha ny vahoaka. Miantso ny feon’ny fieritreretan’ny tsirairay mba hanaja ny aina sy ny fananan’ny hafa. “Mifamatotra amin’ny fitiavan-tena sy ny kolikoly ary ny fahantrana mangitsokitsoka iainan’ny vahoaka ny tsy fandriam-pahalemana koa mitaky fibebahana lalina sy fiovàna toe-tsaina lalina amin’ny olona tsirairay sy amin’ny olon-drehetra”, hoy ny Fem.Fampitsaharana ny fifanenjehana sy adilahy politikaNohitsin’ny hafatra fa tsy sasatry ny manentana ny eveka mba hampandefitra ny adilahy politika sy ny fifanenjehana ary ny mampisara-bazana. “Ndeha hanandratra ny firaisankina sy ny fihavanana ka hifanolo-tanana hampandroso marina ny tanindrazantsika. Homena lanja ilay “fanahy” maha olona sy ny fanajana ny “aina” ka tsy hifandroba sy hifamono isika fa mba hifanaja sy hifankatia amin’ny maha samy Malagasy sy maha samy zanak’Andriamanitra”, hoy ihany ny Fem.Etsy an-kilany, nampahatsiahivin’ny hafatra fa tandindomin-doza ny tontolo iainana sy ireo harena voajanahary ireo noho ny fitrandrahana tsy voahevitra ho fikatsahana tombontsoa manokana sy ny fitadiavan’ny maro, enti-mivelona eo no ho eo vokatry ny fahantrana.Amin’izany rehetra izany, efa misy ary ve ny fiovana amin’izao herintaona, taorian’ny nandalovan’ny Papa Fransoa izao ?R.Nd. L’article Hafatry ny Fivondronamben’ny eveka: “Mahantra noho ny kolikoly sy ny tsy fahaiza-mitantana isika” a été récupéré chez Newsmada.